By ထက်ဦးဝေ 25 May 2017
အစားအသောက်ကို စိတ်ဝင်စားလာကြတဲ့ အစားချစ်သူတွေကြားမှာ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်း စတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ မှိုလိုပေါက်ပေါများလာကြသလို ဒီလို ဆိုင်တွေ များပြားလာတဲ့အတွက်လည်း တဆိုင်နဲ့တဆိုင် အရသာကို ကွဲပြားအောင်၊ ဆိုင်ရဲ့ အပြင်အဆင် အခမ်းအနားတွေ ကွဲပြားအောင် ပြုလုပ်လာကြတာ သတိထားမိကြမှာပါ။
ဒီလို ကွဲပြားမှုတွေထဲက အပြင်အဆင်ဆန်းတဲ့ ဆိုင်လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့နယ်အသီးသီးမှာ ရှိနေကြတဲ့ ဆိုင်များဖြစ်ပြီး ထူးခြားတဲ့ Decoration အပြင်အဆင်တွေကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့ ဆိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ “ST Café” အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ သူက အစားအသောက်အနေနဲ့ အဆာပြေအစားအသောက်နဲ့ တရုတ်အစားအစာ ရရှှိနိုင်ပါတယ်။ တဆိုင်လုံးကို အတွင်းရော အပြင်ရော ဒိုရေမွန်အရုပ်လေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားပြီး အေးအေးငြိမ့်ငြိမ့် သီချင်းသံလေးက ဆွဲဆောင်မှုတခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဓိက စားစရာအနေနဲ့ pancake အမျိုးမျိုး၊ တခြားနေရာတွေမှာ မရှိတဲ့ ခေါက်ဆွဲစိမ်းကြော်နဲ့ ကြိတ်ထားတဲ့ ဘယ်ရီသီးကို soda အနေနဲ့ သောက်ရပြီး အရသာအနေနဲ့ အနည်းငယ်ရှတတရှိတဲ့ smoothieရော milkshake အနေနဲ့ပါ သောက်သုံးနိုင်တဲ့ Lipstick Soda တို့ဟာ “ST Café” ရဲ့ ထူးခြားမှုတွေထဲက တခုအပါအဝင်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်ကို လာရောက် စားသုံးသူများ အလှဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ဖို့ ဒိုရေမွန် အရုပ်တွေနဲ့ အလှဆင်ပေးထားတဲ့ နေရာကလည်း စားသုံးသူတွေကို ဆွဲဆောင်စေနိုင်တဲ့အချက်တခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒိုရေမွန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အစားအသောက် ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ ၈၀၀ ကနေ ၅၀၀၀ အထိသာရှိတာမို့ သင့်တင့်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ဆိုင်လိပ်စာက အမှတ်(၈၉)၊ ၈မိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့က Try Restaurant Menu ပါ။ ဂျပန်၊ တရုုတ်၊ European၊ ထိုင်း အစားအစာတွေကို တနေရာထဲမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ဆိုင်လေးပါ။ ထူးခြားချက်ကတော့ တခြားနေရာတွေမှာ မရရှိနိုင်ဘဲ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် မန်ကျည်းသီးအနှစ်နဲ့တူတဲ့ Try ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ် ပန်းသီးဆော့စ်ကို ချိုချိုချဉ်ချဉ်အရသာနဲ့ မြည်းစမ်းကြည့်နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်ကကြည့်ရင် သိပ်မထူးခြားဘဲ သာမန်စားသောက်ဆိုင်ခန်းလေးသာ ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ထဲရောက်မှ ဝါးလုံး ဝါးခြမ်းတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ ထူးခြားတဲ့အပြင်အဆင်ကို တွေ့ရမှာပါ။ ဖွင့်ထားတဲ့ ခပ်ဆူဆူသီချင်းသံက တိတ်ဆိတ်မှုကို ကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ အနည်းငယ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှာပါ။ အစားအသောက် ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ကနေ ၁၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ထိ ရှိတာမို့ အဆင်ပြေမှာပါ။
ဆိုင်လိပ်စာက No.B (01-11), လမ်းမတော်လမ်း၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တဆိုင်ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်က “Black Hat Wine Bar & Burmese Tapas Restaurant” ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာထမင်းဟင်းကို ဥရောပနိုင်ငံတခုခုမှာ သွားစားနေသလို ခံစားမှုမျိုး ရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး ခပ်မှိန်မှိန်အလင်းရောင်နဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းသံတိုးတိုးက ခံစားမှုအသစ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ နံရံတွေမှာ မြန်မာ၊ ဥရောပနဲ့ ဟောလီးဝုဒ် တို့မှ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံများကို ချိတ်ဆွဲထားတာက ဒီဆိုင်ရဲ့ ထူးခြားချက်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီဆိုင်ရဲ့ ထူးခြားချက် နောက်တခုကို ပြပါဆိုရင် ထမင်းဟင်းတွေကို ပန်းကန်နဲ့ မထည့်ဘဲ ဒန်အိုးတွေနဲ့ တည်ခင်းတာကို ပြရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် ပုံမှန် သောက်နေကျ cocktail တွေနဲ့ မတူဘဲ chilli အရသာပါတဲ့ cocktail ကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာပါ။ အစားအသောက် ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ ၂၅၀၀ ဝန်းကျင်ကနေ ၂၀၀၀၀ ကျော်အထိ ရှိပါတယ်။
ဆိုင်လိပ်စာက No.143/149, ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ဆူးလေပလာဇာ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ တောအုပ်ဆန်ဆန် restaurant & bar တခုရှိတယ်ဆိုရင် အံ့သြမလားပါပဲ။ တခြားဆိုင်တွေနဲ့ မတူဘဲ တကယ် တောအုပ်လေးတခုထဲကို ဝင်ရောက်သွားရသလို ခံစားမှုမျိုး ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ “Stayawhile” Restaurant & Bar ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာကြက်မှာလည်း ဆိုင်နာမည်ဖြစ်တဲ့ “Stayawhile” ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေကို ရေးဆွဲထားပြီး ဆိုင်ကို နက်ပြာရောင် သုတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်၊ ထိုင်းနဲ့ ဥရောပ အစားအစာတွေကို ရရှိနိုင်ပြီး အစားအသောက်တွေကို မြန်မာစတိုင် ပြန်ပြင်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဆိုင်ရဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ “Stayawhile” cocktail ကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ cocktail က အကန့်အသတ်အနေနဲ့ လူတယောက်ကို တခွက်သာ ရောင်းချတာပါ။ Alcohol ပါဝင်မှု များတာကြောင့် တခွက်ထက် ပိုသောက်ရင် တော်တော်မူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အစားအသောက် ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ ၃၀၀၀ ကနေ ၃၀၀၀၀ ကျပ်အထိ ရှိပြီး ညဘက်မှာတော့ Unplugged တီးဝိုင်းရဲ့ အရသာကို ခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်လိပ်စာက No (15), Parami road, (6) ward. Near Hlaing Campus. Mayangone township. Yanon ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆိုင်တွေကတော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အစားအသောက် ကောင်းမွန်ပြီး အပြင်အဆင်ဆန်းသစ်တဲ့ ဆိုင်တွေထဲက ၄ ဆိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ မမြည်းစမ်းရသေးသူများလည်း ခေတ်နောက်မကျရအောင် သွားရောက် မြည်းစမ်းကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။